ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: စင်္ကာပူနိုင်ငံသားတွေလည်း ပျော်ကြတယ်
ဖြောင်း. . . .ဖြောင်း. . .ဖြောင်း . . .
ဘဝမှာ စိတ်လှုပ်ရှားဆုံးနဲ့ ပျော်စရာအကောင်းဆုံးနေ့ကို ပြပါဆိုရင် ဒီနေ့ကိုပြရမယ်. မနက်ကတည်းက မျှော်နေရတာ .. မျှော်လင့်ရကြိုးနပ်သွားတဲ့နေ့လေး တနေ့ပါ.
(အင်း.....စိတ်ချမ်းသာတုန်း ...အကုသိုလ် ကောင်တွေအကြောင်းမပြောတော့ပါဘူး...)
တကမ္ဘာလုံးက ချစ်တဲ့သူ ပေါ်လာပြီမို့...
မင်္ဂလာအပေါင်း ခညောင်းတဲ့နေ့ပါပဲ။ လူတိုင်း အပြုံးပန်းတွေ တစ်ဝေေ၀နဲ့။
စာတွေ လျှောက်ဖတ်ကြည့်နေတာ အလို ငါ့မျက်နှာကြီးကလည်း ပြုံးဖြီးလို့ ထူးခြားလှချည်လား...
ဖတ်နေရတဲ့ စာလုံးတွေရဲ့ စကားသံတွေက ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေ တင်းပြည့်ကျပ်ပြည့်ကို ပါနေတယ်...
ကျက်သရေ မင်္ဂလာအပေါင်းခညောင်းတဲ့ အချိန်အခါ သမယပါပဲဗျာ... :)
ဗိုလ်သန်းရွှေ သေရင် ဒီထက်ပျော်မယ်ထင်ပါတယ်။ စစ်အစိုးရပါ ပြုတ်ကျသွားရင်တော့ အပျော်လွန်ပြီး အသက်ပါ တခါထဲ ထွက်မသွား အောင် မနဲ ထိန်းရမယ်။
ကျနော်လည်း ဝမ်းသာလွန်းလို့ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ထဲမှာရော၊ ဘလော့ဂ်တွေရော၊ သတင်းဝက်ဆိုက်တွေမှာပါ လှည့်လည် ကြည့်ရှု၊ ကွန်မင့်တွေ ရေးနေတယ်။ Kaung ရေ... ဗီဒီယိုလင့်ခ်ကို လာမျှဝေတာ အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
သိပ်ပြီး စိတ်လှုပ်ရှားတတ်တဲ့ သူများ ဒီဗီဒီယိုလေး ကြည့်ကြပါ။
She's the daughter of Burma we can be proud of. She's the one admired by the world leaders. She's the one inspiring the people who love for genuine freedom. She's the one who can dictate the people to go to any direction for her benefit but which is what she would never do. And finally, she's the one who would wholeheartedly shake the hands of those who tried to kill her.
ကျနော် နိုင်ငံရေးလောကထဲရောက်တာ ၂ နှစ်ကျော်ပါပြီ။ ဒီမိုတွေ စိတ်လှုပ်ရှားတာ မကြာခဏဆိုသလို တွေ့ရပါတယ်။ ကောက်ရိုးမီးလိုပါပဲ.. ပြီးတော့လဲ ပြီးသွားတာပါပဲ။ စက်တင်ဘာအရေးအခင်း ဖြစ်တော့ စိတ်လှုပ်ရှားတယ်။ ပြီးတော့လဲ ပြီးသွားတာပဲ။ ဦးဝင်းတင် လွတ်လာတော့လည်း စိတ်လှုပ်ရှားတယ်။ ပြီးတော့လဲ ပြီးသွားတာပဲ။ ဦးတင်ဦးလွတ်လာတော့လည်း စိတ်လှုပ်ရှားတယ်။ ပြီးတော့လဲ ပြီးသွားတာပဲ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်လာတော့လည်း စိတ်လှုပ်ရှားပြန်ပြီ။ ပြီးတော့လဲ ပြီးသွားမှာပဲ။ သိပ်ပြီး စိတ်လှုပ်ရှားရင် ဒီဗီဒီယိုလေး ကြည့်ကြပါ။
It's not really interesting thing whetherawoman who was in conflict makingacountry's development far from other regional countries and lead economic sanctions to make people poor but what it really important is whether she still create unstability to Myanmar society?
We also suspect whether she is real Myanmar citizen or instrument of making Myanmar conflict and poor?
Myanmar without Suu Kyi for almost 20 years is not an issue at all as country is still moving forward even under heavy sanctions and discrimination by developed countries.
The most important thing is whether she can make Myanmar citizen gracious and better life by using her popularity and back up of developed countries.
We still need to monitor who she is?
See whether she can persuade her good friend developed western countries to make good investments in Myanmar create jobs and increase income?Allow Myanmar scholars and young generation to study high technology/modern subjects in these countries' top universities?
Myanmar refugees are enough for them to fill up in low level hard jobs.
အမည်မသိ November 14, 2010 7:21 AM
ဒီမိုစံနစ်က လက်တွေ့ကျင့်သုံးလို့မရဘူး ဆိုတာ တကယ်ပြောနေတာ။ ဒီမိုဝါဒအတွက် အသက်စွန့်မယ်လို့ပြောနေတဲ့ မင်းတို့တွေက ဘလော့လေးမှာတောင် ဝေဖန်မခံနိုင်တဲ့ အနေအထားဖြစ်နေတယ်။ ဘလော့ပေါ်မှာ အဲလောက် အဖြစ်သည်းနေရင် ဘယ်လိုလုပ်ပြီး အပြင်မှာ ဒီမိုဝါဒကို ကျင့်သုံးမှာလဲ? အခုငါရေးတဲ့ကော်မန့်က မင်းပိုက်ဆံ တစ်ပြားမှထိခိုက်တာ မဟုတ်ဘူး။ မင်းအသားလဲ ပွန်းပဲ့သွားတာ မဟုတ်ဘူး။ အဲဒါတောင် မင်းက သည်းခံနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ နအဖဗိုလ်ချုပ်တွေက သူတို့ ရာထူးနဲ့ အသက်ကို စတေးပြီး မင်းတို့ကို စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ ပေးရမယ်လို့ တောင်းဆိုနေတာ.. သဘာဝကျရဲ့လား? ဦးဏှောက်ရှိရင် စဉ်းစားပါ။
နအဖလိုသဘောထားမကြီးသည့် ဒိမိုများကို ဟာသလုပ်နေသည့်
I hate opposition in exile suckers as much as you do but you are another sucker and loser. Don't suck too much, if you meet with hard one your teeth could be goner.
It's not really interesting thing on freedom ofawoman who was in conflict makingacountry's development far from other regional countries and lead economic sanctions to make people poor but what it really important is whether she still create unstability to Myanmar society?
What we should worry is the fate of Myanmar and health of our brave leaders(Senior General than shwe & team) who are constructing and running the country under many restrictions on the global scale.
Suu kyi who is nothing to loose (because she has no commitment and assignments for Myanmar's development at all expect shouting DEMOCRACY and oppose Myanmar leaders) is healthy and fed well during house arrest.Seeing is believing.
It's real world no foreign country/people will love Myanmar nad its' people without getting benefits and privileges.
Suu kyi who is nothing to loose (because she has no commitment and assignments for Myanmar's development at all except shouting DEMOCRACY and oppose Myanmar leaders) is healthy and fed well during house arrest.Seeing is believing.
It's real world no foreign country/people will love Myanmar and its' people without getting benefits and privileges.
ဒီနိုင်ငံသားတွေ ကျွန်တော့်ကို ဘယ်ကလာတာလည်း
“ အောင်ဆန်းစုကြည်...အောင်ဆန်းစုကြည်...” လို့ပြောလေ့ရှိကြတယ်..။တချို့တွေကဆို 'I support Aung San Suu Kyi ' လို့တောင် ပြောကြသေး...။
သူတို့တွေ မြန်မာပြည်ကို အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ ဂျွန်တ
အမည်မသိ November 14, 2010 9:08 AM
ငါက မင်းတို့ ဒီမိုငတုံးတွေလို ကယ်တင်ရှင်ကို မမျှော်လင့်ဘူး။ အဲဒါကို အပြစ်ရှိတယ်လို့ မြင်ရင်လဲမြင်ပေါ့ကွာ။ ဦးဝင်းတင်လွတ်တုံးကလဲ အခုလိုပဲ ဆူညံခဲ့တာပဲ။ အဲဒီတုံးက . . . ဘာမှ ထူးမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ငါကပြောတော့ မင်းတို့က လက်မခံဘူး။ အခုလိုပဲ ဒေါသထွက်ကြတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်တော့ အူမြူးကြပြန်ပြီ။ ကိုယ်တိုင်က ဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုရင် .. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်လာလဲ ဘာမှ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ဘူး။ နောက်တစ်လလောက်ဆိုရင် မထူးဘူးဆိုတာသိလာတော့ . . . ဦးမင်းကိုနိုင်တို့ ထွက်လာရင် ကယ်တင်နိုင်လေ မလားဆိုပြီး စောင့်မျှော်ကြပေါ့ကွာ။ မျှော်လင့်ချက်နဲ့ အသက်ရှင်တယ်ဆိုတာ. .မင်းတို့ ဒီမိုငတုံးတွေကိုပြောတာကွ။ ၀ါးဟားဟား
p.s. အိုင်ဒီလေးနဲ့တောင် မရေးရဲတဲ့သူက ငါ့ကိုခြိမ်းချောက်နေတယ်။ ကြောက်ပါတယ်ကွာ။
ကျွန်တော် နိုင်ငံရေးလောကထဲရောက်တာ ၂ နှစ် ကျော်ပါပြီ။ ထွီ ခွေးသား ဇော်မျိုး။ မင်းက နိုင်ငံရေးသမားလား၊ ငါတော့ ခွေးလိုလျှောက်အူနေတာ ပဲသိတယိ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဘာမှ လုပ်နိုင်တယ် မလုပ်နိုင်ဘူးလဲ မင်း ပြောစရာမလိုဘူး။ ငါတို့ ၀မ်းသာပေးတယ်ဆိုတာလည်း အကျဉ်းကျနေတဲ့ သူတစ်ယောက်လွတ်မြောက်လာတဲ့အတွက် ၀မ်းသာပေးတာ။ သူများတွေမင်္ဂလာရှိတဲ့အချိန်မှာ တော်တော်ကျက်သရေယုတ်တဲ့ကောင်။ ထွက်သွားပါကွာ။ မင်းကို ရွံလို့ပါကွာ..
ကုလားနဲ့ မွေးပြီး ကုလားကိုမုန်းတဲ့ အညာသား လူမဲ အခြောက်မ မူဆလိမ်ဇော်မျိုး..
န.အ.ဖ မင်းကိုဝါဒဖြန့် ဖို့ ပေးတဲ့ လစာထက် မင်းကိုပိုပေးမယ်။ မင်း ဘလော့ဂ် တကာ အီးပေါက်လိုက်ပေါက်နေတာ ရပ်ဖို့ ပဲလို တယ်။ ကိုပေါ သဘောကောင်းလို့မင်းကိုလွတ်ပေးထားတာ အခွင့်အရေးမယူလွန်းပါနဲ့ ။
ဘယ်လောက်အံ့သြ ဝမ်းသာစရာ ကောင်းလိုက်တဲ့ မင်္ဂလာနေ့လဲဗျာ။ ဘယ်သူ့တိုက်တွန်းမှုမှမပါပဲ ထောင်ပေါင်းများစွာသော ပြည်သူလူထုကြီးဟာ အမေစုရဲ့ အပြုံးလေးတချက်၊ အမေစုရဲ့ မျက်နှာလေးကို မြင်ရဖို့ ၂ ရက်လုံးလုံး မိုးလင်းမိုးချုပ်စောင့်နေခဲ့ကြတယ်။ အမေ့အပြုံး၊ အမေ့မျက်လုံးတွေမှာ အကြင်နာတွေ၊ခွန်အားတွေ အပြည့်နဲ့ပဲနော်။ အမေ့မျက်နှာလေးမြင်ယုံနဲ့ ကျနော်အပါအဝင် ပြည်သူတွေအားလုံး ဘာလို့ခွန်အားတွေ ပြည့်လာရသလဲ။ အမေ့နှုတ်ထွက်စကားတခွန်းအောက်မှာ ပြန့်ကျဲနေတဲ့ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေ ပြန်လည်ညီညွတ်လာကြသလဲ။ ဘယ်လိုတန်ခိုးတွေလဲအမေ...
အမေ့ကို ၁၅ နှစ်တိတိ ကျနော်တို့ မြင်ကွင်းအောက်က ဖြောက်ထားခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် အမေ့ကိုကျနော်တို့ နှလုံးသားထဲကတော့ ဘယ်လိုမှ(သူတို့တွေ) ဖြောက်လို့မရခဲ့ပါဘူးအမေ။
အဲ့ဒါတွေကြောင့် ဒီမိန်းမလို မိန်းမရ စိတ်နဲ့ စစ်အစိုးရက အမေ့ကို မနာလို မရှုစိမ့် ဖြစ်နေကြတာပေါ့။ အမေကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်ပါနော်။ အမေ့လုံခြုံရေးက အရမ်းအရေးကြီးတယ်။ အမေ့ကို ဝန်းရံကြပါ။ အမေတဦးတည်းသာ ဗမာပြည်အတွက် စစ်မှန်တဲ့ ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်ကို လမ်းပြနိုင်မှာပါမလို့ပါ။ ကျနော်တို့တတွေလဲ အိမ်ပြန်ချင်လှပြီ အမေ...
ဒီမိုငတုံး.. မင်းတို့ ငတုံးတွေက ဦးဏှောက် လုံးဝ မရှိဘူးနော်။ ကိုယ်နဲ့ အမြင်မတူရင် နအဖလူလို့ပဲ တံဆိပ်တတ်တယ်တယ် မဟုတ်လား? မင်းတို့လိုကောင်မျိုး ဒီမိုငတုံးဘ၀က လွတ်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ကြံ့ဖွတ်အမာခံတွေရအောင် ကူညီပေးလို့ ကုလားကို ဆန့်ကျင်ဖို့ အကျိုးအကြောင်းနဲ့ ရှင်းပြထားပါလျက်နဲ့ .. ငါ့ကို ဆဲဆိုထားတယ်။ မင်းအဆင့်အတန်းနဲ့ အညီစကားပြောတာ သဘောပေါက်ပါတယ်။ နောက်နောင်မှာ ဦးဏှောမရှိတဲ့ မင်းရဲ့စကားကို အရေးတယူပြန်ပြောမည်မဟုတ်ပါ။ ဒန်..ဒန်..ဒန်
If Suu Kyi still doing unstability to Myanmar,I and all humanitarian people(Myanmar Citizens) will piss off her face and curse her all generations suffer as same as what Myanmar citizens suffered and suffering now.
The best suggestion for Suu kyi is go back to her stepfather country and pray for her great grandfather Bo Min Yaung and father Aung Sann souls peaceul.
They may be staring at her and curse?
ခွေးသား၊ ၀က်မြေး၊ ကြက်ယောက်ဖ ဇော်မျိုး အခုထိ မရပ်သေးပါလား၊
Please read above link to know some Myanmar citizens' thinking and expectation after freed Daw Su .
Don't stop only at anti-goverment protest .
We are not Zaw Myo.Ok?
We are not shadows but real honest people who really care their own country.
It's real voice from new generation of Myanmar who can't trust Suu Kyi as national leader.
She might possibly be puppet and instrument of some foreign countries looking for cheap resources?
The best suggestion for Suu kyi is go back to her stepfather country and pray for her great grandfather Bo Min Yaung and father Aung Sann souls peaceful.
The agenda to use "anon" is to
keep privacy, not everyone is
a fool like you who isapygamy
who thinks barkingagiant like
Daw Su will make youagiant.
A dog barking at swinging dick
of the elephant will not become
well endowed with elephant.
Did you ever finished high school
at all? Either in Canada or Yangon?
Go and get education loser!
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို Obama က ဒီမိုကရေစီ Heroတဲ့ ..
မြန်မာပြည်သူတွေကလည်း သန်းရွှေကို အာဏာသူခိုး ပြည်သူဘဏ်ဏာ သူခိုးကြီးလို့ချစ်စနိုးနဲ့ ခေါ်ကြပါတယ်။
(ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား ကုလားမ အခြောက်မ သူခိုးဇော်မြင် သခင်ဇော်မျိုး)
ချစ်လို့ စ တာပါကွာ။
ဘဘကြီးကို ချစ်ကြသလို မင်းကို လူတကာကချစ်ကြပါတယ်။
နောက်နှစ်ကျရင် ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ကွာ မင်းကို တို့ မဲ ပေးမယ်။
မင်းကိုလည်းငါမပြောပါဘူးကွာ။ ငါက ဇော်မျိုးကိုပြောတာပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ မင်းက ဇော်မျိုးထက်ဆိုးတယ်။ ဇော်မျိုးကလူလည်။ သာပေါင်းညာစား။ မင်းက မှိုင်းမိထားပုံရပါတယ်။ တခုတော့ပြောချင်တယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဆိုတာဘာလဲမင်းသိလား၊ သူ့သမိုင်းကိုရောမင်းဖတ်ဖူးလား။ နောက်တစ်ခုက အကယ်၍အောင်ဆန်းစုကြည်နေရာမှာမင်းအမေဆိုရင် မင်းဒီလိုပြောနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မိသားစုကို ဟိုးအရင်ဗမာအစိုးရက အဝေးကိုရောက်သွားစေချင်လို့ နိုင်ငံခြားကို သံတမန်အနေနဲ့ပို့ပစ်လိုက်တာ။ မင်းအမေကိုလည်း အဲဒီလိုပို့လိုက်မယ်ဆိုရင် မင်းအခုစကားတွေထွက်လာစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူး။ အမြင်ကျယ်ကျယ်ထားပါကွာ။ မင်းကို ဇော်မျိုးလိုတော့ မပြောချင်ပါဘူး။ အဲဒီကောင်က သိသိကြီးနဲ့ ထမင်းစားဖို့လေးအဆင်ပြေလို့ ခွေးလို အူနေတာ။
Good News and graceful to see Daw Su's face !
However, Gyokoke is always tricky and that release was conspired item of psywar program to get favour on their election's result.
သခင်းရှုးဟေ့ ငမျိုး (သို့) ဇော်ကန့်လန့်
" ဒီမိုကရေစီ အခြေခံဆိုတာ လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုပိုင်ခွင့်ပါ။ လွတ်လပ်စွာ ဆဲဆိုပိုင်ခွင့်နဲ့ မတူပါဘူး။ နားလည်အောင် ပြောတတ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ အမြင်ချင်းဖလှယ် ရမယ်။ လေ့ကျင့်ယူရမယ် " (ဒေါ်စု စကား)
မင့်က ဆွေးနွေးတာမဟုတ်ဘူး။ ရှုးကြောင်ကြောင်နဲ့ လိုက်ဆဲနေတာကို ဘယ်သူက လက်ခံမှာလဲ
I admire Daw Su more than my own
mom. The problem is there are
dark forces on both sides of our
problem. Rogue elements have been
exploiting Burma for so long. Now
those buggers are silent and they
are waiting to put the wedge between her and generals.
From "ဆုံမှတ်တဲ့ - ကမ္ဘာစိုးမင်း"
နယူးယောက် (or Tokyo too?) ကနေ
အမေ့ လွတ်မြောက်ရေး ကြိုးပမ်းနေကြပါသတဲ့။"
စနေနေ့ ညပိုင်း ၇ နာရီ ၁၅ မိနစ်လောက်မှာပေါ့
( ကြွားတာလဲပါမှာပေါ့နော် )မေမေလွတ်သွားပြီ
သူ့ ရဲ့ ပင်ကိုအသံဋ္ဌသဇာအပြည့်နဲ့ အကျယ်ကြီး
ရှေ့ဆက်လျှောက်မည့် နိုင်ငံရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ယခု တိတိကျကျ မပြောနိုင်သေးသည်ကို ခွင့်လွှတ်စေလိုကြောင်း၊ ချက်ချင်း တန်းပြောလျှင် မစဉ်းစားရာ ရောက်မည် ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ပြည်သူများ၏ အသံကို ဦးစွာ နားထောင်လိုကြောင်း ပြောသည်။ အာမခံချက်မပေးလိုကြောင်း၊ အာမခံခြင်းသည် လာဘ်ပေးခြင်း တမျိုးဖြစ်ကြောင်း ပြောသွားသည်။ သည်းခံရမည်၊ လိုချင်လျှင် အနာခံရမည်ဟုလည်း ဆိုသည်။
We can't agree with above Suu Kyi speech.
It's not the time to suffer or sacrifice for no solid achievement and personal popularity?
we condemn this kind of speech.
Suu Kyi should ask her sons come here and suffer together with Myanmar Citizens.
don't stay hide and enjoy good life in their STEP FATHER country.
We know Aung Sann very well as I'm Myanmar citizen staying in Myanmar for4decades.it's 60years old back events and already became history.
We are currently at 21st century having totally different world orders.You can't know what'll be the result for what it never happened?
Focus on current and learn lessons from the past?
What's happening to Myanmar now?
Don't say it's because of no DEMOCRACY and HUMAN RIGHTS.
See one of the emerging power of Asia,a neighbouring country and how they can compete with world super powers?
Because this country has good citizens who love their country and valued eventhough there's no DEMOCRACY or Whatever Bull shits?
They are rich and strong?
What Myanmar people are doing now?
Condemn their own country,sanction their own country?
That's why Suu Kyi can screww up our country and mislead the people to hell.
Don't write only Burmese(Myanamr) language to hide who you are?
I don't think you can't write English well?
Don't focus onaperson named Zaw myo on internet through key board to manipulate readers.
Just discuss Right or wrong.
You are not dare your post read by international people?
I think you don't really understand what Daw Suu meant. We are the one who needs to struggle, not her. She can only give us leadership. We must beagood followers in order to achieve what we want. Your small little contribution will count. She didn't make herself popular. It is the junta who makes her popular. Our inability to bring the country prosperous makes her popular. We have to admit that we were just waiting for her for so long and after she spoke like that, many people were shock. But what she said is damn true. I dont have any offence to the previous comments. I am just giving my honest opinion. I am very happy to see her release and I can only hope for our better future. Btw, there is nothing to do with her sons. They have their own personal choices and we must respect it.
To Patriotic Citizen,
If you can't agreed, May I know what do you believe ( agreed ) to make Myanmar better?
Do you believe the crap what crazy people saying " staying against Muslim will bring Peace to Myanmar" ?
မျိုးချစ်နိုင်ငံသားလို့ အရေခြုံနာမည်ယူထားသူရေ၊ မြန်မာ့အရေးမို့၊ (ခင်ဗျားတို့လိုစစ်ကျွန်တွေ ပြောလေ့ရှိသလိုပေါ့၊) အမေကျော်ဒွေးတော်လွန်းသူ မဟုတ်တာကြောင့် ဗမာစာနဲ့ပဲ ပြန်ရေးသားပါတယ်။ ခင်ဗျားပြောခဲ့တဲ့ ဒေါ်စုဟာ တိုင်းပြည်တွင်းပဋိပက္ခကို ဖန်တီးသူဆိုတာ ဘာကိုအထောက်အထားပြုပြီးဆိုတာပါလဲ? ဒေသတွင်းတိုင်းပြည်တွေထက် နောက်ကျကျန်ခဲ့တာ ဒေါ်စုကြောင့်၊ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုဟာ ဒေါ်စုကြောင့်၊ တိုင်းပြည်မတည်ငြိမ်အောင်လုပ်တာ ဒေါ်စုလို့လဲ ခင်ဗျားဆိုခဲ့တယ်၊ ဘာအထောက်အထားနဲ့ ဒီလိုစွပ်စွဲနေသလဲ? သိချင်ပါတယ်။
ခင်ဗျားက ဒေါ်စုဟာ မြန်မာတိုင်းရင်းသားဟုတ်ရဲ့လားလို့ သံသယရှိသလို၊ ကျနော်တို့ကလဲ ဒီလိုအခါသမယမှာ ဒီလိုအပုပ်အဆိပ်အတောက်တွေကို အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ ဒီမှာလာပြီး လိမ်းပေကျံနေတဲ့၊ မျိုးချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ နိုင်ငံသားနာမည်ခံထားတဲ့ ခင်ဗျားအပေါ်မှာ များစွာသံသယရှိပါတယ်။
ဒေါ်စုမပါဝင်တဲ့ နှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်အတွင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ရှေ့သို့လျှောက်လှမ်းနေဆဲပဲလို့ပြောတာ ခင်ဗျားချေးပုံထဲ ခေါင်းထိုးပြီးနေလို့၊ အဖြစ်မှန်ကို မသိမြင်နိုင်တာဖြစ်လိမ့်မယ်၊ ဒါမှမဟုတ် တိုင်းပြည်ချေးပုံထဲ တိုးနေတာကို ခင်ဗျားနှစ်သက်လက်ခံနေလို့ ဒီစကားမျိုးပြောတာဖြစ်ရမယ်။ တိုင်းပြည်ကိုချစ်လို့တော့ ဟုတ်ဟန်မတူဘူး။
ဒေါ်စုကလဲ ပြောပြီးပြီ “လက်ဖြန့်တောင်းတာလဲ မကြိုက်ဘူး၊ ကိုယ်တိုင်လည်း လက်ဖြန့်မတောင်းချင်ဘူး၊ ပြည်သူကလည်း လက်ဖြန့်ပြီး တောင်းချင်စိတ်မရှိဘူးလို့ယုံကြည်တယ်” တဲ့၊ ကျနော်လဲ ဒီလိုသဘောထားရှိတယ်၊ ခင်ဗျားပဲ လိုချင်ရင် (ခင်ဗျားရဲ့ဆရာကြီးတွေ ဒေါ်လာဆယ့်တစ်ဘီလျံတောင်းခဲ့သလို)အနောက်နိုင်ငံတွေဆီက good investments တွေ လက်ဖြန့်တောင်းပေတော့၊ ဒေါ်စုကိုတော့ မျောက်ပြဆန်တောင်းဖို့ သွားမတိုက်တွန်းလေနဲ့။ အဲဒီအနောက်နိုင်ငံတွေမှာ အဆင့်မြင့်နည်းပညာတွေသင်ယူနိုင်ဖို့ကတော့ ခင်ဗျားရဲ့ဆရာကြီးတွေ မတရားဖိနှိပ်သတ်ဖြတ်၊ မင်းလုပ်အုပ်ချုပ်နေသရွေ့ကတော့ တရုတ်၊ မြောက်ကိုရီးယား၊ ရုရှားတို့ရဲ့ မီးကျိုးမောင်းပျက်နည်းပညာတွေနဲ့ ပဲကျေနပ်နေပါတော့လို့ ပြောချင်ပါတယ်။ နည်းပညာတတ်လာလို့လဲ တိုင်းပြည်ကို ပိုကောင်းမှာထက် ပိုဆိုးအောင်လုပ်မှာ လူတိုင်းသိနေတယ်။ အဏုမြူလက်နက်၊ ဓာတုအဆိပ်လက်နက်၊ ဂူဂလိုဏ်စီမံကိန်းတွေလိုပေါ့။
ခင်ဗျားရဲ့ အလွန်သတ္တိဗျတ္တိရှိတဲ့ ထမိန်ခြုံ ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေ (brave leaders) ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုတော့၊ ခင်ဗျားနေ့စဉ်ဖင်ဘူးတောင်းထောင်ပြီး ရှိခိုးဆုတောင်းနိုင်ပါတယ်၊ ခင်ဗျားရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးပါ၊ ကျနော်တို့အသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ လူထုကတော့၊ ဒီသေနာတစု မြန်မြန်ကာလနာတိုက်ပါစေလို့ နေ့စဉ်ဆုတောင်းနေပါရဲ့။
တိုင်းပြည်မှာ ဒုက္ခသုက္ခပင်လယ်တွေဝေနေတာ ဒေါ်စုကြောင့်လို့ စွပ်စွဲနေတဲ့ခင်ဗျားဟာ သစ်ပင်မှားကို ဟောင်နေတဲ့ခွေးဝဲစားတကောင်ပဲလို့ ကျနော်ထင်ပါတယ်။
ခင်ဗျားအထင်ကြီးနေတဲ့ ခင်ဗျာ့သခင်ဗိုလ်စုတ်တွေရဲ့ပထွေးတော် တရုတ်နိုင်ငံ တိုးတက်တယ်ဆိုတာ၊ အဲဒီနိုင်ငံမှာ သူတို့ဖုံးဖိထားတဲ့၊ လူတွေခုထိ ငတ်ပြတ်သေကျေနေတဲ့အဖြစ်တွေကို ခင်ဗျားမှာ ဝါဒမှိုင်းမိပြီး ဗဟုသုတနည်းလို့မသိတာလား၊ သို့မဟုတ်ရင် ဒို့ရဲ့တိုင်းပြည်ချေးပုံတိုးနေတာကို တိုးတက်နေပါတယ်လို့ယူဆတဲ့ ခင်ဗျားရဲ့စိတ်ထားကြောင့် အယူမှားနေတာလား တခုခုပါပဲ။ ဒီလိုအယူမှားနေသူဟာ မျိုးချစ်တဲ့နိုင်ငံသားလို့ နာမည်ခံထားရုံနဲ့ ခင်ဗျားကိုကျနော်မယုံပေမယ့်၊ တိုင်းပြည်ချေးပုံတိုးမှ ခင်ဗျားဟာ ဖားစားကပ်စားကျွန်ခံစားကောင်းမယ့် လူမျိုးတယောက်ဖြစ်မှန်း သေချာနေတာတော့ ကျနော်ကောင်းကောင်းကြီးယုံကြည်ပါတယ်။ ခင်ဗျားရဲ့ စစ်ကျွန်ဘဝ ကောင်းစားနေပေမယ့် တခြားအသိဉာဏ်ရှိသူတွေကို ဒီမှာဝင်ပြီး ကျွန်ပွဲစားလာလုပ်တာတော့ ခင်ဗျားမှာ အောင်မြင်မှုရမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့လဲ မှာလိုက်ချင်ပါသေးတယ်။
My fine fellow Myanmar citizens,countrymen,overseas workforce,....
Base on your(ပြည်သ) above post,
Can you please answer exactly:
1)Does Suu Kyi can make Myanmar to becomeadeveloped rich country?If YES,why she never came back to Myanmar before 1988 riots.She arrived Myanmar for her mother health status?
Did she had any proof of activity in Myanmar's development while she's enjoying good life staying out of Myanmar?Did she participate/contribute for poor Myanmar people before 1988?
2)Any successful track record while she was in United Nations Or any other political organozation/NGO?
For good example U Thant's grandson Thant Myint who was political officer for Balkan conflicts?
If there's no such thing we'll have to name Suu Kyi as OPPORTUNIST/WIDOW-TURNED-POLITICIAN by CHANCE
does she an ACHIEVER?
I can tell you 100% confident all qualified Myanmar young/middle/old generations will not support her anymore.
OK?You can still shout but we all welcome upcoming cabinet selected by majority of Myanmar people...
Enough to educate you fine fellows.
You'll not see any of my opinions hereafter.
Whoever with this name is not me.
Patriotic Citizen ဆိုတဲ့ ဗမာလိုမရိုက်တဲ့ မျိုးချစ်ကြီးတော့ ချီးနင်နေလောက်ပီ..
န.အ.ဖ ထဲဝင်လုပ်ဖို့ နဲ့Patriotic Citizen လို န.အ.ဖ အောက်ဆွဲ လုပ်ဖို့ ကတော့ ဆောက်ရှက်မရှိဖို့ လိုတယ်။
Dude you need to take basic English
classes! Your English sucks!
1) Does Suu Kyi can make
-(should be)-> Can she make
2) Did she had
-(should be)-> Did she have
3) OK? -(should be)-> Ok!
4) cabinet selected by
-(should be)-> cabinet elected by
5) I can tell you 100% confident all -(should be)->I can tell you 100% confidently that all
If you wereaqualified Burmese, then I must be super qualified!!
ဟားဟား! စစ်ကျွန်ဖားစား၊ မျိုးချစ်နိုင်ငံသားတဲ့၊ ဗြောင်လိမ်ဗြောင်စား၊ ကျွန်သဘောက်စိတ်နဲ့ အယူမှားတဲ့လိပ်ကောင်၊ (သူတပါးကို ပညာပေးချင်သေးတယ်တဲ့ စစ်ဘုရင်တွေရူးတွေရဲ့ ဒူးမနာသားကျွန်က) သွားလျက်ပေါ့နင် စစ်ကျွန်ကက်ဘိနက်တွေရဲ့ဖင်၊ ဂွင်ဆိုးလာလို့ ဂီလာနာတိုက်ခါမှ၊ ခွေးလိုက်တဲ့ကြက်မ,လို ကတော်ကတော်အော် ပြန်မလာပါနဲ့ အရှက်လဲမဲ့ ခွေးကိုက်ရာနဲ့ ဆေးကုလို့အလကား ဗူးသီးနဲ့ညား ဟင်းအိုးထဲဝင်စေဗျားလို့ နေ့စာစီရင်မယ်မှတ်ထား။
I had to bite my tongue seeing so-called Patriotic guy's clumsily worded English and incredibly awesome ideology. But my restraint was gone short when that smart guy sounded proud of giving his Politics and English lecture giving such solid evidence as
[I don't think you can't write English well?
You are not dare your post read by international people?]
to let us know his superduper English ability.
Well, regarding your silly questions, I bet nobody would bother to answer.
လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုပိုင်ခွင့် လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုပိုင်ခွင့် ဆိုတာ
လွတ်လပ်စွာ ဆဲဆိုပိုင်ခွင့်နဲ့ မတူဘူးလေ။
¨Did she had any proof of activity in Myanmar's development while she's enjoying good life staying out of Myanmar?¨
Which tenses did you use?
If that is past simple and past continue should be........
The past simple shows complete actions in the story, usaually the main events.
We often use while to link these two tenses. It goes before the past continous.
ဘိုလိုရေးရင် ဘိုစာပီသ အောင်ရေး ကမျောက်ကချောက် ရေးနည်းနဲ့ မရေးနဲ့။ ခင်ဗျားတို့ ဆရာကြီး နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး လုပ်နေတဲ့ ဥာဏ်ဝင်း ဆီမှာ ချဉ်းကပ် သင်ယူပါ။ ဘိုလို ဘယ်လို ရေးရ ပြောရတယ် ဆိုတာ။ ကိုပေါ ဆီမှာ မတောက်တခေါက် နဲ့ ဘိုလို ကော့မင့် ရေးနေတာ မျက်စိနောက်တယ်။ ခင်ဗျား ရေးတဲ့ ဘိုစာကို ဘိုလိုကောင်းကောင်း နားလည်တဲ့ သူတွေဖတ်တဲ့ အခါ ရီစရာ ဖြစ်နေတယ်။ ဘိုလို ကောင်းကောင်း မတတ်ရင် ဗမာလိုပဲ ရေးပါ။ ကိုယ်ဘိုလို ရေးနိုင်ကြောင်းကို ခပ်တည်တည်နဲ့ သူက အတည်ပေါက် ချရေးပြီး ကော့မင့်ပေးတာ သဒ္ဒါ က သောက်တလွဲ တွေဖြစ်နေတယ်။ ဟီး ဟီး ဟီး။ ခင်ဗျားတို့ တပ်မတော် က သင်ပေးတဲ့ ဘိုစာ ဆိုတာ ဒါမျိုးလား။ ခင်ဗျား ကော့မင့် မတင်ခင် သက်ဆိုင်ရာ အထက် အရာရှိဆီမှာ ထောက်ခံစာ ယူရသေးသလား။ အဲဒီ လူလဲ ဘိုလို တော်တော် ကျွမ်းမှာ ပဲနော်..... သနားတယ်။
Patriotic Citizen ရေးတာ ရိုးရှင်းတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာနဲ.ရေးတာပါ ၊ အဓိကအရေးကြီးတာ က သူဆိုလိုတာကို နားလည်ပြီး အချက်ကျကျ ပြန်လည် ချက်ပနိုင်ဖို.က ပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်
တစ်ချို.ကွန့် မန့် ရေးသူများဟာ မြန်မာစာ ရိုက်နေကြ မဟုတ်လို.လည်း ဖြစ်မှာပါ ၊ ကျွန်တော်နဲ. Patriotic Citizen တို. ဟိုးအရှေ.က ပို.စ်တစ်ခုမှာ အငြင်းပွား ခဲ့ပါသေးတယ် ၊ သူ.ကို မကြိုက်တာနဲ. သူရဲ့ အင်္ဂလိပ်စာကို judge လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိပါဖူး
အောက်က ကိုပေါရဲ့ "တော်ကြာပါတော့ဗျို." ဆိုတဲ့ ပို.စ်လင့်ကို မဖတ်ဖူးရင်ဖတ်ကြည့်ပါ
အဲ့ဒီ့မှာ တင်းမားဆက်ရီဗျူး မှာ ပါတဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီး တစ်ယောက် အင်္ဂလိပ်စာနဲ.ပတ်သက်တဲ့ ဆောင်းပါးတပုဒ် ကြောင့် မြန်မာတွေနဲ. စလုံးတွေ ကွန်မန်.တွေအပြန်အလှန်ရေးကြပါတယ် ၊ တစ်ချို.မြန်မာတွေအင်္ဂလိပ်စာရေးနိုင်ကြပြီး တစ်ချို.က တော်တော်အခြေအနေ ဆိုးပါတယ် judge လုပ်တာထက် ကွန်မန်.ရေးတဲ့ စလုံးတွေက မြန်မာတွေရဲ့ အင်္ဂလိပ်စာကို ညံ့လိုက်တာလို. မဝေဖန်ကြပါဖူးဆိုတာကို ထောက်ပြချင် လို.ပါ ၊ (စကားချပ်အနေဖြင့် ကျွန်တော် လည်း အင်္ဂလိပ်စာမကျွမ်းကျင်ပါ)
Patriotic Citizen ကို အင်္ဂလိပ်စာ ညံ့တယ်လို. ပြောတဲ့သူတွေက U.K မှာ ငယ်ငယ်ကတည်းက Primary 1 ကနေ ဘွဲ.ရတဲ့အထိ တက်ခဲ့တဲ့သူဆိုရင် ကျွန်တော် မပြောလိုတော့ ပါဖူး ၊ အဲ့ဒီ့လိုငယ်ငယ် ကတည်းက နိုင်ငံခြားမှာနေ ၊ အင်္ဂလိပ်စကား သင်ယူသူ များ ဆိုရင်လည်း ခင်ဗျား တို.လောက် မြန်မာလို ဝေဆာနေအောင် ရိုက်နိုင်မှာမဟုတ်ဖူးလို.လည်း တွေးမိပါရဲ့
နောက်ဆုံးအနေနဲ. အင်္ဂလိပ်လို ကွန်မန်.ရေးသူတွေအထဲမှာ လေးစားရတဲ့သူက Thu ပါ ၊ သူ.ရဲ့ ကွန်မန်.တွေကိုအကြိုက်ဆုံးပဲ ၊ အင်္ဂလိပ်စာ အရေးကောင်းသလို အတွေးအခေါ်ကလည်း ကောင်းပါတယ် ၊
ပို.စ်နဲ.မဆိုင်တာတွေလျောက်ရေးနေတာ ဗွေမယူပဲ အရင်က ကိုပေါရဲ့ ပို.စ်အဟောင်း ကို ကြေငြာဝင်တယ်လို.ပဲ သဘောထားပြီး အိမ်ရှင်ကိုပေါကလည်း ခွင့်လွတ်လိမ့်မည်ဟု ထင်မိပါသည် ၊
Better Than DEMO NGA TONES said...
Hi friend, how about your current position in your carrer ? Why do you comment on others by this way? Are you very smart and get wealth in your life ?Please compare your position & U Nyan Win . OK ?????We are fighting for language ? T4,SPDC generals are promote day by day during nonsense fightings of chicks .Wah har har .... U Than Shwe may don't know English and technogical things but he know very well about Myanmars.